China GRH Guorui Hydraulics, onye ndu na nyiwe arụ ọrụ igwe nrụpụta na Nweta | Guorui
Hydraulic gia mgbapụta
ra nrata valvụ
GRH Guorui Hydraulics, onye ndu na nyiwe arụ ọrụ ikuku
Ikuku ọrụ ikuku (AWP) bụ ụdị akụrụngwa pụrụ iche emepụtara ma mepụta iji gboo mkpa nke arụmọrụ dị elu. Ọ nwere ike ibuli ndị ọrụ, akụrụngwa, akụrụngwa, wdg. Site na ikpo okwu ọrụ gaa ebe a kara aka maka nrụnye dị iche iche, Ọrụ mmezi, ma nye nkwa nchekwa maka ndị ọrụ. Igwe ikuku na-arụ ọrụ ikuku nwere ọtụtụ ngwa mgbada, ma nwee njirimara teknụzụ ngwaahịa kpụ ọkụ n'ọnụ yana uru dị elu. Ihe ndi ozo bu ihe kariri ihe owuwu, ulo oru ugbo, ugbo elu ugbo elu, ihe ndi ozo na nhazi, ihe ndi ozo na nhicha, ndi agha, ebe ndi ozo na ndi ozo, ndi ozo na ndi ozo.
N'ahịa mba ụwa, North America, Western Europe na Japan bụ ndị isi na-arụ ọrụ nyiwe ikuku. Terex na JLG na United States, Sky jack na Canada, Haulotte na France, na Aichi na Japan buru ibu buru ibu, na-agbago n'etiti mmadụ ise kachasị elu n'ụwa. Uche zuru ụwa ọnụ nke AWP dị elu, na ụdị ụlọ Dingli na Xingbang na-eto ngwa ngwa. Na 2018, Dingli họọrọ nke iri na ụwa, Hunan Xingbang Heavy Industry dekwara 19th. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Lingong, Xugong, Liugong, Zhonglian na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ amụbawokwa R & D na mgbalị mgbasawanye ahịa ha, ma ha nọ na nke abụọ nke ụlọ ọrụ ahụ. N'ọdịnihu, ka ọnụ ọgụgụ ahịa na-aga n'ihu na-agbasa, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ọdịnala ọdịnala ga-erukwa na mpaghara a. E nwere nnukwu mgbanwe na asọmpi n'etiti ụdị ụlọ na ụlọ ọrụ.
Mmepe nke nyiwe oru ikuku na China abughi oge, ulo ahia adighi ama nke oma. Ejighi ebe eji arụ ọrụ ikuku. A ka na-achịkwa ọtụtụ ọrụ ikuku site na ịkwa akwa ma ọ bụ jiri forklifts dochie ya. N'okwu ole na ole, a na-etinye ikpo okwu n'elu kreen. Igbe iji mezuo nzube nke arụmọrụ dị elu. Na 2018, ọnụọgụ AWPs dị na China dị ihe dịka 95,000, nke bụ nnukwu ọdịiche ma e jiri ya tụnyere nkeji 600,000 na United States na nkeji 300,000 na mba iri Europe.
Kemgbe afọ 2013, AWP anụ ụlọ nwere mmụba ngwongwo kwa afọ nke ihe dịka 45%, ma ọ ka nọ n'ọgba ọsọ ọsọ ọsọ. Ma ọ bụ n’ihe gbasara mkpokọta ngwakọ, ngwongwo nke onye ọ bụla ma ọ bụ ntinye ngwaahịa, ọ na-ebugharị ya site na nchekwa, akụ na ụba, yana arụmọrụ dị elu. N'ọdịnihu, ahịa AWP anụ ụlọ nwere opekata mpe okpukpu 5-10 na-eto eto n'ọdịnihu.
Dịka ezigbo onye na-eweta ngwa ọrụ ikuku, Guorui Hydraulics etinyela aka na mpaghara a karịa afọ 20. Ejiri pumps gia, igwe eletriki nke hydraulic, akụrụngwa ike, na njikwa ikike hydraulic, ọ bụ naanị onye na-eweta ngwa ahịa na-arụ ọrụ nke akụkụ hydraulic Terex na Asia. A na-eji ngwa ahịa zuru ezu na ngwaahịa ndị ụlọ na ndị mba ọzọ na-arụ ọrụ ntanetị.
Igwe akụrụngwa nke a na-ejikarị na AWP bụ moto nke eji eme ihe. Ọ bụ ndị mba ọzọ na-achịkwa ya na mmalite afọ. Guorui gosipụtara talent dị elu n'ụlọ na mba ofesi, jiri aka ya mepụta usoro GWD, wee mepụta diski diski na-emechi emechi emechi. Na ụdị valve ụdị aka mgbapụta, mgbe ejiri OEM ụlọ kwupụta ya, ekwuputala ya n'ahịa ahụ.
Mwepụta ngwaahịa ọhụrụ sitere na hydraulic Guorui ...
Guorui haịdrọlik (GRH) sweeper bụ shippe ...
Nyocha nke ọdịda nke hydraulic ...
Nhazi nke hydraulic valves
Ihe dị iche n'etiti sys hydraulic mepere emepe ...
Mmmmmmmmmmmmmmm hr Ailee）
Copyright - 2010-2019: All Rights echekwabara. Products Guide - Apụta Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile